होटल व्यवसाय छिट्टै सञ्चालनमा आउँछ : पर्यटनमन्त्री भट्टराई « Janata Samachar
काठमाडाैं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले होटल व्यवसाय छिट्टै सञ्चालनमा आउने बताउनुभएको छ । मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भट्टराईले कोरोना संक्रमण जोखिमको अवस्था हेरेर व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
अहिलेको पर्यटक/ग्राहक नै आउन नसक्ने अवस्थामा होटल सञ्चालन गरेर मात्रै नहुने उहाँले बताउनुभयो । व्यवसायीहरुले सञ्चालन अनुमतिका लागि पटकपटक आग्रह गरेपनि छलफल चलिरहेको उहाँले बताउनुभयो । भोलि होटल सञ्चालनमा आएपछि कसरी सतर्कता अपनाउने भन्ने विषयमा पर्यटन बोर्डसँग मिलेर काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मान्छे आएर बस्नुपर्यो, मान्छे बस्नुपर्यो । पर्यटकहरु आउनुपर्यो । आन्तरिक पर्यटक पनि आउनुपर्यो । होटलमा बस्न सुरक्षित छैन । सामाजिक दुरी छैन। अरु उपायहरु अवलम्बन भएको छैन भने होटल खोलेर मात्रै को आउँछ ? त्यसैले प्रत्येक पर्यटकीय क्षेत्रहरुलाई आवश्यक प्रोटोकल तयार गर्नुहोस् भनेर जारी भएको छ । सबै ठाउँमा पुगेको छ । सबै होटल व्यवसायीहरुले त्यो अनुसार आफूलाई तयारीमा राख्नुपर्यो ।’ व्यवसायीहरुले होटल सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रोटोकल तयार गरेर आए छलफल गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
एयरलाइन्सहरुले पनि आवश्यक प्रोटोकल बनाएका छन् । तर सञ्चालनका लागि केही समय अझै लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । होटल र एयरलाइन्ससँग अरु कुराहरु पनि जोडिएको उहाँले बताउनुभयो । कोरोना संक्रमणको ग्राफ बढ्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अरु देशहरुको तथ्याङ्क अध्ययन गर्दै पर्यटन क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग सल्लाह गरी छिट्टै सञ्चालनका लािग सीसीएमसीमा प्रस्ताव लिएर जाने उहाँले बताउनुभयो ।
पर्यटनमन्त्री याेगेस भट्टराइ
‘अध्यक्ष सबैको हो, प्रचण्ड समूहमा जोडिन चाहन्न’
काठमाडौं । पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नेपाल लगानी बोर्डको
संक्रमणबाट त्रसित भएर यसअघिको जस्तै देशभर लकडाउन हुने मनस्थिति कसैले पनि बनाउनु नपर्ने डा. खतिवडाकाे